Business – Page2– Nepal Reports
मनिपालका डाक्टरहरुले भने ‘घाइते ल्याएकाे खबरै भएन’
April 25, 2017 Arjun Giri
अर्जुन गिरी स्वास्थ्य मन्त्रालय गठन गरेको कार्यदलले सोमबार मनिपाल मेडिकल कलेजलाई स्पस्टीकरण बुझाएको छ । मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठ संयोजक रहेको ३ सदस्यीय कार्यदल सोमबार नै पोखरा आएर प्रारम्भिक अध्ययन पनि थालेको छ । कार्यदलमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. ढुण्डिराज पौडेल र मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडा छन् । मुस्ताङको कागबेनीमा […]
बेपत्ता बैंकर खनालले लेखे मन छुने खुल्ला पत्र
April 23, 2017 Arjun Giri
आदरणीय , मित्रहरू , इष्ट मित्रहरू ,घर परिवार , तथा शुभ चिन्तकहरु मा मेरो नमस्कार । २०७४ बैशाख १ गते बेलुका सम्म राम्रै भनियेको मानिस, बैशाख ३ गते बाट एका यक नराम्रो , फटाह, चोर र भगुवा भयेको छ । यो समय को खेल रहेछ । मैले जिन्दगीमा कसैको नराम्रो सोचिन । जस्ले जति बेला […]
बैंकमात्रै होइन, व्यक्ति पनि ठगिए
अर्जुन गिरी कैलाश विकास बैंक लामाचौर शाखाका प्रमुख रविचन्द्र खनाल बैंकको मात्र नभएर धेरै व्यक्तिको पैसा असुलेर भागेको गुनासो आएको छ । खनालले बैंक, ग्राहकमात्र नभएर साथीहरूको समेत रकम लिएर बेपत्ता भएका हुन् । कैलाश विकास बैंकले वैशाख ५ गते खनालविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी दिएको थियो । […]
बेपत्ता बैंकर खनालको जायजेथा रोक्का
April 20, 2017 Arjun Giri
अर्जुन गिरी कैलाश विकास बैंकले आर्थिक अनियमितता गरी भागेका पोखरा लाचाचौर शाखाका प्रमुख रविचन्द्र खनालसहित ५ कर्मचारी निलम्बित गरेको छ । उक्त शाखामा बैंकले बुधबारदेखि अरु कर्मचारी खटाएको छ । कर्मचारीले पैसा हिनामिना गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि निक्षेपको चिन्ताले शाखा पुगेका कतिपय ग्राहकलाई बैंकले पैसासमेत दिएको छ । कतिपयलाई पनि बचतकर्ताको पैसा केही नहुने भन्दै […]
करोडौं कुम्ल्याएर कैलाश बैंकका म्यानेजर भागे
April 19, 2017 Arjun Giri
अर्जुन गिरी- करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याएर कैलाश विकास बैंकको एक शाखाका म्यानेजर भागेका छन् । पोखराको लामाचौरस्थित उक्त बैंक शाखाका प्रबन्धक रविचन्द्र खनाल वैशाख १ मा भागेका हुन् । उनले नेपाल छाडिसकेका छन् । लायन्स क्लबको कार्यक्रमका सिलसिलामा एकपटक अमेरिका घुमेर फर्केका उनीसँग उक्त देशको ५ वर्षको भिसा रहेकाले उतै गएको अनुमान छ । ६ महिनाअघिमात्रै […]
कर छली गर्दै एनसेल
April 17, 2017 Arjun Giri
अर्जुन गिरी- नेपालकै सबैभन्दा धेरै ग्राहक बनाउन सफल निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार संस्था एनसेलको ठगी धन्दाको नयाँ शैली फेला परेको छ । पोखराको राष्ट्रबैंक चोकछेउमा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लगायत कर छली गरेर रिचार्ज कार्ड बिक्री गरिरहेको फेला परेको हो । काठमाडौंमा दर्ता भएको प्राइम एक्सेज प्रालिको नाममा कर छलेर रिचार्ज बेचेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ […]
बिक्नै छाड्याे घरजग्गा
April 16, 2017 Arjun Giri
गाेविन्द सुवेदी- लगानीय योग्य रकम कम भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी घटाएपछि पोखरा र आसपासमा घरजग्गा कारोबार खस्केको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गर्न थालेपछि अटोसागै घरजग्गाको कारोबार सिथिल भएकोल हो । जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीमा हिजोआज पहिलाको जस्तो भीड देखिँदैन । बैंकहरुले कर्जामा कडाई गरेसँगै जग्गाको कारोबारमा […]
पाेखराकाे फेवा ताल संकटमा ( हेर्नुहाेस केही तस्बिरहरु )
अर्जुन गिरी- सानो फाँट, पूर्वपट्टि केही पर नीलो पोखरी जस्तो देखिन्छ । मन्द हावा, कताकति चराको आवाज । वरपर छिपछिपे हिलो । केही मान्छे त्यहाँ उभिएका थिए । तर उनीहरूको जुत्ता, चप्पलमा कत्ति हिलो लागेको थिएन । हुन त उनीहरू सिमसार क्षेत्रमै डुलिरहेका थिए । फाँटको सतहबाट करिब २ मिटर अग्लो ठाउँमा उभिएर उनीहरू कुरा […]
‘पढाइ नसक्दै जागिर ढुक्क’
अर्जुन गिरी- अध्ययन सकेपछि के जागिर खाने वा व्यवसाय गर्ने भने विद्यार्थीमा चिन्ता हुन्छ । पढेको विषय व्यवहारमा लागू हुँदैन । अन्तत पढाइमा भएको लगानी उपलब्धिपूर्ण हुँदैन । अहिले यति धेरै प्राविधिक विषय छन् । जुन विषय व्यवहारिक भएकै कारण जागिरका लागि धेरै समय कुर्नै पर्दैन । पढाइ पूरा नहुँदै कामको सुनिश्चितता हुन्छ । यस्तै […]